#Ukhetho2019: Bazoqashwa ngolokhozi ababhikishela ukhetho – Southern Express
#Ukhetho2019: Bazoqashwa ngolokhozi ababhikishela ukhetho
BASABISA ngokuduba ukhetho kwezinye izindawo KwaZulu-Natal ngoba bekhala ngokugqoza kokulethwa kwezidingo.
Izolo amakhulu abantu baseMbadleni eJozini bavuke umbhejazane bavala imigwaqo bekhala ngokugqoza kwentuthuko endaweni yabo.
Lo mphakathi ube nombhikisho ongekho emthethweni ngemuva kokungayitholi imvume yokuthi umashe.
Okhulumela lo mphakathi, uMnuz Thomas Tembe, uthe abalubhadi okhethweni ngoLwesithathu ngoba asikho isidingo.
“Sekuphele iminyaka engu-12, singenawo amanzi. Amanzi sisawaphuza nezinkomo kodwa saqala ukuvota ngo-1994,” kusho uTembe. Uthe ngisho ugesi awukho endaweni yabo okwenza impilo ibe nzima.
NaseNdwedwe kunokwesabela ukuthi kungase kuphazamiseke ukuvota njengoba kunomphakathi okhala ngokungalethwa kwezidingo.
ENdwedwe kusolwa uMbhishobhi Bheki Ngcobo ngokuthi nguyena ogovuza umphakathi ukuze udube ukuvota. Eziphendulela uNgcobo uthe akuyena ohlohla umphakathi kodwa iwona ozisukumelayo ngoba ungaluboni ushintsho empilweni yawo.
“Kuyilungelo lawo umphakathi ukuthi uzwakalise ilaka lawo uma ubona ukuthi izinto azihambi kahle,” kusho uNgcobo.
Ku-ward 26, eThekwini, abantu abebengene ngo “dli” ehhotela okungahlali muntu kulona nabo basabise ngokuthi abayi okhethweni ngemuva kokukhishwa kule ndawo ngesankahlu izolo.
Omunye wabo ulunywe yizinja zamaphoyisa omkhandlu, abanye bashaywa kanzima njengoba kade bekhishwa kule ndawo.
Laba bantu bathi sekuphele iminyaka engu-15, bethenjiswa indawo yokuhlala kodwa kuze kube imanje abakanikwa.
Omunye wabo okhulume neSolezwe kodwa wacela ukuthi angadalulwa ngoba ezibona engaphephile, uthe ziningi izindawo ezingenabantu eThekwini wathi inkinga ukuthi umasipala uyazidayisa ziphendulwe izindawo zokuhlala izitshudeni.
“Asiyi okhethweni, kuzovota amajuba lawo agcwele emafulethini angahlali muntu.”
Okhulumela uMkhandlu weTheku, uMnuz Msawakhe Mayisela, uthe basazoqale baqinisekise ukuthi ibhilidi ngelikabani ngaphambi kokuthi bakwazi ukuphawula.
Okhulumela uMkhandlu waseNdwedwe uNksz Thobile Nxumalo, uthe bazwile ngezinsongo zokuphazamisa ukhetho babe sebebiza umhlangano wamakhosi nezinduna ngoMgqibelo.
“Sikholwa ukuthi ukubizwa komhlangano kusebenze kakhulu ngoba njengoba umbhikisho wokuphazamisa bekumele uqale namhlanje (izolo) kodwa ugcine ungaqalanga. Isimo sithule eNdwedwe, siyathemba sizothula kuze kuphele isonto,” kusho uNksz Nxumalo.
Okhulumela uMasipala waseJozini, uMnuz Nhlonipho Ndlovu, uthe bazwile ngabantu baseMbadleni ababhikishayo, wengeza ngokuthi izikhulu zomkhandlu zizohlangana nabo ukuze zizwe ukuthi bakhala ngani.
Ibamba likaKhomishana we-IEC KwaZulu-Natal, uNkk Ntombifuthi Masinga, lithe uhlelo lokuvota oluyisiphesheli luhambe kahle izolo kodwa wathi bakhathazekile ukuthi kunezindawo lapho kunezinsongo zokuphazamisa ukhetho.
“Siyazi ngezigameko ezimbalwa ezibikiwe lapho kubekhona imibhikisho, izigameko zibikwe eMandeni, Ndwedwe, Maphumulo, Ubuhlebezwe naseMlaza,” kusho uNkk Masinga.
Okhulumela uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu KwaZulu-Natal, uMnuz Lennox Mabaso, uthe benza konke okusamandleni abo ukuzama ukulungisa inggalasizinda ecekelwe phansi izikhukhula ngaphambi kokhetho.
Uthe kunezindawo eziningi ezinemigwaqo ecekeleke phansi ngenxa yezikhukhula okudinga ukuthi ilungiswe.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uBrigadier Jay Naicker, uthe amaphoyisa azobe etshalwe yonke indawo ukuze aqaphe isimo.
Previous Ulindwe ngabomvu umcimbi we Ezakithi Awards
Next Akasekho uSoso obedume kuqembu IYASA